Iindaba - Ulwazi lwe-welded wire mesh
Ulwazi lwe-welded wire mesh
Umnatha wocingo oludityanisiweyo ludityaniswe ngocingo lwentsimbi, ucingo lwentsimbi yekhabhoni. Umngxuma womnatha usisikweri.Unyango lwangaphezulu lunokwenziwa ngombane, lufakwe igalvanized eshushu, lufakwe i-pvc lugqunywe.Eyona nto ichasene nomhlwa yi pvc edityaniswe net. Umnatha wocingo oludityanisiweyo, unokwahlulwa ube ngumqulu odityanisiweyo wocingo kunye nepaneli yocingo oludityanisiweyo.
Umnatha wocingo oludityanisiweyo usetyenziswa kakhulu kushishino, kwezolimo, ekuzaleni, kulwakhiwo, kwezothutho, emigodini kunye neminye imiba. Ezinje ngeendawo ezivalekileyo zoomatshini, iindawo ezivaliweyo zezilwanyana, iintyatyambo nemithi, iifestile, iipaseji, iipaseji, iikheji zeenkukhu, iingobozi zamaqanda kunye neengobozi zokutya. ikhaya kunye neofisi, iingobozi zephepha kunye nemihombiso
Umzekelo, umnatha wocingo odityanisiweyo wePVC usetyenziswa ikakhulu kwiishelufa zevenkile enkulu, umhombiso wangaphakathi nangaphandle, ukufuya iinkukhu, iintyatyambo kunye nocingo lwemithi, ngaphandle esetyenziselwa i-villa, indawo yokuhlala yodwa yocingo, enemibala eqaqambileyo, isisa esihle, i-anti-corrosion, yenza. ayipheli, iingenelo zokuchasana ne-ultraviolet, umbala ozikhethelayo: oluhlaza obumnyama, ingca eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama, ebomvu, ephuzi kunye neminye imibala.
Umgangatho we-welding mesh yombane umiselwa ubukhulu becala kwi-diameter ye-wire, i-dimension yangaphandle kunye nendlela i-welding eqinile ngayo.
1. Iimfuno ze-solder joints:
Okokuqala, indawo ye-welding kufuneka iqine, ayinakuba ne-welding virtual, ukuvuza kwe-welding phenomenon.Indawo ye-welding ayinamandla ombane we-welding mesh, njenge-iron scrap general.Ke yintoni uhlobo lwendawo yokuwelda, efanelekile ezimbini 3mm umnatha welding yombane, ukuphakama iyonke yocingo kabini superposition yi 6mm.Emva kwe-welding, ukuphakama kwe-superposition ye-double wire welding point kufuneka ibe phakathi kwe-4-5mm.Indawo ye-welding i-welding enzulu kakhulu ayiqini, indawo ye-welding inzulu kakhulu i-mesh exhasayo amandla axhasayo buthathaka, kulula ukuwaphula.
2. Ulawulo lwemposiso yedayamitha yocingo:
Impazamo yedayamitha yocingo eqhelekileyo ingaphakathi ± 0.05mm.Xa uthenga umnatha wocingo oludityanisiweyo, sukujonga nje ukuba lisezantsi kangakanani ixabiso, kodwa kuxhomekeke kubunzima beqhekeza ngalinye.Ifomula yokubala ubunzima ingasetyenziselwa ukumisela ukuba impazamo yedayamitha yocingo ingaphakathi koluhlu olufanelekileyo.
3. Impazamo esengqiqweni yobungakanani besikrini:
Ngoku imveliso ye-mesh i-welding enkulu yomatshini ozenzekelayo, impazamo iye yaba yincinci kakhulu.Ngenxa yokungqubana kwesinyithi ngexesha le-welding, kuya kubakho ukwandiswa kwe-thermal kunye nokunciphisa okubandayo, kunye nokuphambuka okufanelekileyo ngokuqinisekileyo kukho.Ngokubanzi, impazamo yediagonal ingaphakathi dibanisa okanye thabatha 5mm, kwaye impazamo yedimensional ingaphakathi dibanisa okanye thabatha 2mm.
Ixesha lokuposa: Nov-18-2020